म्यानपावर व्यवसायीहरूको प्रवेशले बदनाम बन्दै परामर्श व्यवसाय — Motivatenews.Com
काठमाडौँ – शैक्षिक परामर्शमा व्यवसायमा म्यानपावर व्यवसायीहरूको प्रवेश भएको छ । त्यसै पनि बदनाम भइरहेको परामर्श व्यवसायमा म्यानपावर व्यापारीको प्रवेशले झन् बदनाम बनेको छ ।
विविध कारणले म्यानपावरहरू बन्द भएपछि उस्तै–उस्तै तर अलि फरक (शैक्षिक परामर्श) व्यवसायमा उनीहरूको प्रवेश भएको हो । उनीहरूको प्रवेशले विद्यार्थीहरूमा भ्रम सृजना भएको, कम्पनी दर्ताविनै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वीकृति विना व्यवसाय गरेर व्यवसायीको विश्वासनियतामा आँच पुगेको छ ।
यसरी म्यानपावरबाट कन्सल्टेन्सीमा रूपान्तरण भएको संस्था हो गोरेटो एजुकेसन कन्सल्टेन्सी । नयाँ बानेश्वरमा रहेको गोरेटो एजुकेसनले सामान्य दर्ता प्रक्रिया समेत पुरा नगरी भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्दै विद्यार्थीहरूलाई प्रलोभनमा पारेको छ । क्यानडामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो कन्सल्टेन्सी २०७७ सालको सुरुवातदेखि नेपालमा सञ्चालनमा आएको हो ।
उक्त कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक हुन धिरज कँडेल । चार्टर ग्लोबल ह्युमन रिसर्चका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका उनी कोरोना कहरपछि शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा प्रवेश गरेका हुन । मलेसियासहित खाडी मुलुकमा नेपाली कामदारहरूलाई श्रम भिसामा पठाउने कँडेल शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा प्रवेश गरेको १ वर्ष हुन नपाउँदै बदनाम बनेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीलाई ठूलो धरौटी रकम माग गरेको र उक्त धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि उनले व्यवसाय परिवर्तन गरेका हुन् । नेपाली नागरिकले हरेक व्यवसाय गर्न पाउन अधिकार भएको भए पनि व्यावसायिक मर्यादा कायम गर्न नसक्दा उनी बदनाम बनेका हुन् । बजारमा क्यानडाको आफूमा स्पेसल एजेन्ट भएको, अंग्रेजीमा आफूजस्तो जान्ने कोही नभएको, आफू एसओपी एजेण्ड भएको, प्रोग्राम एक्सपर्ट भएको भन्दै अफवाह फैलाइरहेका छन् ।
‘शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा प्रवेश गरेको १ वर्ष नपुन्दै एसओपी स्पसलिस्टको प्रमाण–पत्र कसले दियो ? अंग्रेजीमा मास्टर्स गरेका उनले प्रोग्राम एक्सपर्ट भनेर आफूलाई परिचित गराएका छन् । प्रोग्राम एक्सपर्टको मान्यता कसले दियो ?’ लामो समयदेखि परामर्श व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरूको प्रश्न छ, ‘? म्यानपावर चलाएर बसेको मान्छे एकाएक विद्यार्थीको परामर्शदाता कसरी बन्न सक्छ ।’
२० औँ वर्ष परामर्श व्यवसायमा बिताएका एक व्यवसायीका अनुसार कामका लागि विदेश पठाउने व्यवसायीले जुनसुकै पेसा अङ्गालेको भए पनि अन्त्यमा कामकै कुरा गरेर विद्यार्थीलाई पनि भ्रममा पार्ने गरेका हुन्छन् । ‘नानीमा लागेको बानी भने जस्तै विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि पठाउँछु भने पनि अन्त्यमा कुरो आएर कमाइमै जोडिन्छ’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती व्यवसायीले भने, ‘उनीबाट फुत्किएर आएका धेरै विद्यार्थी मसँग छन् । क्यानडाबाट अमेरिका छिराउन सकिने आश्वासन उनले दिने गरेका रहेछन् ।’
उनले अर्काको कन्सल्टेन्सीबाट भिसा लागेका विद्यार्थीहरूलाई पनि आफ्नो कन्सल्टेन्सीबाट भिसा लागेको भनेर सार्वजनिक रूपमै विज्ञापन गरिरहेका छन् । उनको कन्सल्टेन्सीबाट कति जनाको भिसा लाग्यो थाहा छैन तर अरू कन्सल्टेन्सीहरुले लगाएको भिसालाई आफ्नो भनेर प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् । यी र यस्तै कारणले म्यानपावरबाट परामर्श व्यवसायमा आएका व्यवसायीहरूका कारण झन् झन् बदनाम बन्दै छ परामर्श व्यवसाय । शैक्षिक परामर्श व्यवसायसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले पनि यस विषयमा चासो राखेर व्यवसाय बदनाम हुनबाट रोक्नेकी ?
२०७७ चैत २१ गते प्रकाशित